Madax-dhaqameed Tiro Badan Oo U Baxaya Ceel-afwayn, Goboladda Ay Ka Baxayaan Iyo Ujeedada Socdaalkooda | Saxil News Network
Madax-dhaqameed Tiro Badan Oo U Baxaya Ceel-afwayn, Goboladda Ay Ka Baxayaan Iyo Ujeedada Socdaalkooda
Ceel Afwayn (Saxilnews.com)-Madax-dhaqameed tiro badan ayaa la filayaa inay maalmaha soo socda safar ugu baxaan degmada Ceel-afwayn ee gobolka Sanaag oo ay dib uga soo cusboonaatay colaad sokeeye oo u dhaxeeya laba beelood oo Ood-wadaag ku ah deegaanada degmada Ceel-afwayn.
Madax-dhaqameedkan tirade badan ayaa ka kala baxaya gobolada Maroodi-jeex,Togdheer,Sanaag Iyo Sool,waxaana madax-dhaqameedkani dhamaantood ay iskugu biyo shuban doonaan degmada Ceel-afwayn,waxaana madax-dhaqameedkani ay iskugu jiraan madax-dhaqameedka labada Beellood iyo waliba madax-dhaqameed kale oo iyagu dhex-dhexaadin iyo heshiisiin ka dhex wada labadan beelood.
Waxaana ujeedada madax-dhaqameedkani ay tahay sidii ay nabad waarta u dhex dhigi lahaayeen labadan beelood oo dirirtu dhex marayso isla markaana ay dhawaan mar kale shaqaaqo khasaare sababtay dhex martay,waxaana ay kulamo la qaadan doonaan beelahan diriraya iyaga oo dhex-dhexaadin wada.
Sidoo kalena waxa iyaguna Barri oo Isniin ah magaalada Hargeysa ka baxaya guddi xildhibaano labada gole qaran ka tirsan iyo masuuliyiin kale,kuwaas oo u baxaya xalinta shaqaaqadaasi kasoo cusboonaatay Ceel-afwayn iyo deegaanada hoos yimaada.
Xaaladda amaan ee deegaanada Ceel-afwayn ayaa ah mid dagan,waxaaan gacanta ku haya amaanka guud ee deegaanada ciidamada Qaranka Somaliland kuwaas oo wali ku kala dhex jira.